नक्कली शंकराचार्य हेमानन्द गिरीको पशुपतिनाथमा रुद्राभिषेक स्थगित - Suvham News
नक्कली शंकराचार्य हेमानन्द गिरीको पशुपतिनाथमा रुद्राभिषेक स्थगित
August 11, 2018 by gsmktm
काठमाडाै‌ : शंकराचार्यका रुपमा पशुपति पीठमा औपचारिक प्रवेश गर्नेगरी तयार पारिएको हेमानन्द गिरीको कार्यक्रम रोकिएको छ। अखिल भारत विद्धत परिषद्ले आफूलाई पाशुपत क्षेत्रमा अवस्थित पशुपति पीठको शंकराचार्य घोषणा गरेको भन्दै उनी भदौ ८ गते रुद्राभिषेकको तयारीमा थिइन्।
सनातन विद्धत परिषद् नेपालका सचिव पण्डित रामकृष्ण उपाध्यायले शंकराचार्यको नाममा पशुपति पीठमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेकी गिरीको कार्यक्रम स्थगित भएको बताएका हुन्। परिषद्ले शनिबार सुमार्गी भवनमा आयोजना गरेको ‘सनातन धर्ममा अन्त्येष्टि संस्कार १३ दिन नै’ पुस्तकको विमोचन समारोहमा उनले भने, ‘हेमानन्द गिरी को हुन् ? के हैसियत छ उनको ? शंकराचार्य भएको तर्क गर्ने भए एक एक विषयमा हामी तयार छौं।’
उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कुनै पनि मठ मन्दिरमा त्यस्ता शंकराचार्यलाई बस्न नदिने दाबी गरे। ‘यदि त्यसरी बसेको थाहा पायौं भने त्रिशुल र भाला लिएर प्रतिकारमा उत्रनेछौं’, उनले थपे।
सनातन विद्धत परिषद् नेपालका सचिव पण्डित रामकृष्ण उपाध्यायले भने, ‘हेमानन्द गिरी को हुन् ? के हैसियत छ उनको ? शंकराचार्य भएको तर्क गर्ने भए एक एक विषयमा हामी तयार छौं।’
प्राध्यापक डा. दीर्घराज घिमिरेले वेद आत्मश्वाताफी कल्पसूत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यक्तिमात्रै शंकराचार्य हुने बताए। उनले सनातन् विद्धत परिषद्कै कार्यक्रममा भने, ‘चारजनाले भन्दैमा कोही शंकराचार्य हुँदैन, एक हजारले भने पनि हुँदैन तर १० विशिष्ट विद्धानले आधिकारिक रुपमा स्वीकार्नुपर्छ।’
Prevप्रहरी संगको दोहोरो भिडन्तमा अपहरणकारि हरुको घटना स्थलमा नै मृत्यू
Nextअवकाे एक बर्ष भित्र अरनिकाे राजमार्ग पुर्ण रुपमा सन्चालन हुनेछ – मन्त्रि बास्कोटा